Football Khabar » रियल पछि हटेपछि जोभिक भित्र्याउने दौडमा बार्सिलोना, तिर्ला त महँगो मूल्य ?
रियल पछि हटेपछि जोभिक भित्र्याउने दौडमा बार्सिलोना, तिर्ला त महँगो मूल्य ?
स्पेनिस रियल मड्रिडले अनुबन्धका लागि ‘डिल फाइनल’ भएको भनिएका जर्मन क्लब फ्रान्कफुर्टका फरवार्ड लुका जोभिक पुनः सरुवा बजारमा ‘हट केक’ बनेका छन् । क्लब फ्रान्कफुर्टका डाइरेक्टरले आफ्ना खेलाडी रियललाई बेच्नेबारे हालसम्म कुनै सम्झौता नभएको बताएपछि यसको पुष्टि भएको हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाका अनुसार रियल २१ वर्षीय युवा फरवार्डका लागि ६० मिलियन युरो रकम तिर्न तयार भएको र त्यसैअनुसार डिल फाइनल भएको खबर यसअघि आएको थियो ।
तर, फ्रान्कफुर्टले आफ्ना स्टार खेलाडीका लागि मूल्य बढाएर १०० मिलियन युरो रकम माग गरेपछि रियल जोभिक भित्र्याउने दौडबाट पछि हटेको बताइएको छ । रियलले जोभिकका लागि १०० मिलियन हाल्न तयार नभएपछि फ्रान्कफुर्टका अधिकारीले आफ्ना खेलाडीबारे बोलेका हुन् ।
फ्रान्कफुर्टका निर्देशक फेर्डी बोबिककले मिडियासँग भने, ‘यो प्रष्ट पार्न चाहन्छु कि, जोभिकका लागि रियल मड्रिडसँग हालसम्म कुनै सम्झौता भएको छैन ।’
२१ वर्षीय सर्बियन फरवार्डलाई यसपघि बार्सिलोनाले पनि भित्र्याउन चाहेको ििथयो । तर, रियलले जोभिकका लागि सक्रियता बढाएपछि बार्सिलोना पछि हटेको थियो ।
अहिले आएर रियल जोभिक अनुबन्धबाट पछि हटेपछि बार्सिलोनाले पुनः उनलाई भित्र्याउन प्रयास गर्ने देखिएको छ । बार्सिलोनाले टिमका उरग्वेन फरवार्ड लुइस स्वारेजको विकल्पमा यसअघि जोभिक भित्र्याउन चाहेको थियो ।
जोभिकले यो सिजन बुन्डेसलिगामा ३२ खेल खेल्दै १७ गोल गरेका छन् । ५ गेलका लागि असिस्ट गरेका छन् ।
प्रकाशित मिति ८ जेष्ठ २०७६, बुधबार ०२:१०